Isibuyekezo se-This is Vegas Casino yase Ningizimu Afrika
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-‘this is vegas’ casino
Isibuyekezo se-‘this Is Vegas’ Casino
Isofthiwe:Rival, Betsoft, Tom Horn Gaming, Spinomenal, Saucify
Ibhonasi Lokukwamukela:300% ne 999 ama-spins
100 ama-spins Ayikho Idiphozithi
Uma ungumdlali wekhasino, i-Las Vegas yindawo okufanele uyivakashele okungenani kanye empilweni yakho. Kodwa lokho kungenzeka ukuthi kungenzeki maduze ngenxa yezinto ezahlukahlukene. Ngakho-ke wenzani okwamanje? Yiya ku-inthanethi ukuze udlale ama-slot akho owathandayo nemidlalo yamakhadi, phela!
Njengoba iyikhasino ye-inthanethi, igama elifana ne “This Is Vegas” yigama eninesibindi. Kepha le khasino ye-inthanethi esebenzisa isofthiwe ye-Rival ingaphila ngokuvumelana nalesi sihloko? Lowo ngumbuzo esizozama ukuwuphendula kulokhu kulesi sibuyekezo sika-2021 se-Vegas Casino Yabadlali baseNingizimu Afrika.
Ake siqale izinto ngalokho esikubona kuqala–
Ngokuya ngokubukeka, i-This Is Vegas ngokuqinisekile ibukeka njengekhasino elincane ye-inthanethi enesitayela. Iklanywe yaba nemibala emihle yasebusuku- emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka nokumpunga. Izimpawu zama-slot akudala ezinjengengama-Cherries zengeza ukubonakala kombala, kanye nezimpawu ezikhanyayo ze-neon oke uzibone e-Vegas Strip.
Yebo yiqiniso – lena yikhasino ekhangayo kakhulu yezikrini ze-PC noma ezeselula. Futhi uma siqala ukuyibheka, inazo zonke izici ezinkulu ongazilindela ekhasino ye-inthanethi yanamuhla ngo-2021 – amathani emidlalo yama-slot e-inthanethi, ukweseka amaselula, amaphromoshini amakhulu kakhulu, nezindlela zokukhokhwa ezisheshayo.
Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-'this Is Vegas' Casino
Ngemuva kokuzama amabhonasi e-This Is Vegas, singasho ngokuphepha ukuthi le khasino inebhonasi evelele yabadlali abasha. Inebhonasi enkulu elingana nediphozi namakhulu ama-spins amahhala, asatshalaliswa kumadiphozithi akho amabili okuqala ekhasino.
100% Ibhonasi Yokukwamukela + ama-Spin Amahhala angu-999 Kudiphozithi Yokuqala
Ingxenye yokuqala yale bhonasi ingatholwa ngokuvula i-akhawunti entsha yasekhasino bese wenza idiphozithi yakho yokuqala yemali okungenani engu-R250. Ibhonasi inezici ezilandelayo
Ibhonasi yediphozithi engu-100% efika ku-R10,00
Inezidingo zokubheja eziphansi ezingu-20x
Imali Ongayikhipha ayinamkhawulo – ungakwazi ukukhipha lokho okuwinile
Ukuthola le bhonasi sebenzisa ikhodi NEW100_999SPINS
Uma usuqedile ukumbheja wonke u-100% webhonasi yokukwamukela, ungathatha ingxenye Yeboibili yephakeji nezici ezilandelayo
Ikhasino ikunikeza ama-spin amahhala angu-999 asebenza ku-slot 10xWins
Ibhonasi inomkhawulo wokukhipha ka-R3,500
Ikhodi yebhonasi yale phromoshini 999VEGASPINS
200% Ibhonasi Yediphozithi Yesibili
Le yingxenye Yeboibili yebhonasi yakho yokukwamukela e-This Is Vegas Casino. Inezici ezilandelayo:
Umkhawulo wemali ongayicela ngu-R2,000
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali zingu-30x
Ikhodi yebhonasi yale phromoshini 200MATCH
Awukho umkhawulo wemali ongayikhipha kule phromoshini
300% Ibhonasi Yokukwamukela Ye-Bitcoin + 100% Ukheshi Obuyiselwe
Lena yibhonasi yokukwamukela ekhethekile ebhekiswe kubadlali abakhetha ukwenza izinkokhelo nokukhipha imali ngama-bitcoins. Le phromoshini isebenza kudiphozi yakho yokuqala ekhasino futhi inezici ezilandelayo:
Idiphozi yokuqala ngama-bitcoins ingathola ibhonasi engu-300%
Ikhodi yale bhonasi ithi 300BTC
Ngemuva kokuphothula leyo bhonasi, ungathola enye ibhonasi ka-100% ukheshi obuyiselwe
Ukuthatha ukheshi obuyiselwe, sebenzisa ikhodi 100BTCBACK
Amakhodi Amabhonasi Ediphozithi Engekho e-This Is Vegas Casino
I-This Is Vegas Casino inikeza inanbungako elimangazayo kubadlali abasha baseNingizimu Afrika ngephromoshini ekhethekile yebhonasi yediphozithi engekho. Uma ubhalisa kule khasino, ungacela izinzuzo ezilandelayo ngaphandle kokuchitha irandi elilodwa:
Ama-Spin Amahhala angu-100 ngokuphelele free
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-This Is Vegas Casino
Abadlali abavamile baseNingizimu Afrika e-This Is Vegas Casino bangathatha iphromoshini engatholakali kunoma iyiphi enye ikhasino ye-inthanethi. Empeleni, le yiphromoshini eyinhloko abanayo ekhasini lamaphromoshini engasiyo ibhonasi yokukwamukela.
Isiqiniseko Ukheshi Ubuyiselwa Nsuku Zonke
Bonke abadlali abajwayelekile ekhasino banesiqinisekiso sokuthi kubuyiselwa ukheshi 10% nsuku zonke
Lokhu kuncike emalini oyilahlekelwe EBANJELWE ngosuku lwayizolo ekhasino
Futhi uma ulahlekelwa yimali elingana no- $100 ngesonto, uthola ukheshi obuyiselwe 25% masonto onke ngoMsombuluko.
Ikilabhu ye-VIP e-This Is Vegas
Bonke abadlali ababhalisiwe abanamadiphozithi bajoyina ikliabhu ye-VIP ezingeni eliphansi kakhulu
Bathola imihlomulo enjegebhonasi Yamasonto Onke ka-R100, Ibhonasi Yosuku Lokuzalwa ka-R100, kanye nephoyinti eli-1 ngesikhathi ngasinye ubheja -R10.
Ngaphezulu kwezinga eliphansi kakhulu, Kunamazinga e-VIP angu-3
Abadlali bangakhuphuka amazinga ngokubheja ngemali yangempela futhi bathole amaphoyinti omvuzo
Emazingeni aphezulu, wonke amabhonasi ayakhuphuka, futhi uthola imali ebuyiselwa masonto onke eyengeziwe efinyelela ku-R25,000
Ikhasino ibuye inikeze ama-spin ajwayelekile amahhala namanye amabhonasi alinganayo kubo bonke abadlali abayi-VIP
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-This Is Vegas Casino
Inqubo yokungena nokubhalisa e-This is Vegas Casino ilula impela. Noma ngubani angaqeda ngemizuwana uma elandela lezi zinyathelo:
Vakashela iwebhusayithi yekhasino nge-PC yakho noma ngesiphequluli sedivayisi Yeboelula lapha
Chofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka ethi “Bhalisa”
Kusikrini esivelayo, ikhasino izokubuza ngemininingwane elandelayo
Iphasiwedi entsha ye-akhawunti yakho yasekhasino
Faka lonke lolu lwazi ngokunembile
Vumelana nemigomo nemibandela bese uqedela inqubo yokubhalisa
I-akhawunti yakho entsha yasekhasino idaliwe
Uzocelwa ukuthi uqinisekise isixhumanisi esithunyelwe kukheli lakho le-imeyili ukuqedela inqubo
Bese ungaqala ukufuna amabhonasi akho ediphozithi engekho kanye nokukwamukela!
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-This Is Vegas Casino
I-This Is Vegas iyikhasino esebenzisa isofthiwe ye-Rival Gaming software. Esikhathini esedlule, amakhasino asebenzisa i-Rival ayehlinzeka kuphela imidlalo evela kulowo mhlinzeki wesofthiwe. Kodwa izinto ziye zathuthuka kakhulu eminyakeni yamuva. Amakhasino e-Rival anjenge-This Is Vegas anikela ngemidlalo eminingi evela kwamanye amakhasino amakhulu njenge-Betsoft, i-Saucify, i-Spinomenal ne-Tom Horn.
Inani eliphelele lemidlalo elitholakala kule khasino lisondele ku-200. Lokho kungabonakala kuyinani eliphansi, kepha imidlalo ithembekile ngo-100% futhi isezingeni eliphakeme. Ukuphequlula iqoqo lemidlalo kulula ngoba yonke ihlukaniswa kahle ngezinhlobo. Le yimidlalo ongayijabulela kule khasino ngo-2020-
Ungadlala yonke into kusuka kuma-slots akudala kuya kuma-slots evidiyo anamuhla, ama-slots anezindaba, kanye nama-jackpot akhula njalo (progressive jackpots) e-This Is Vegas casino. Iqoqo lama-slots lapha lihluke ngokumangalisayo futhi ligcwele izihloko ezingaphezu kwezingu-100 ezijabulisayo. Imidlalo efana ne-Heroes Realm, i-Tahiti Time, i-Chariots of Fire, i-Jumping Jaguar, i-Mighty Aphrodite kanye ne-Party Parrot ibukeka iheha kakhulu kule khasino!
Imidlalo Yakho Yetafula Yakudala
Uma ungumthandi wemidlalo yakudala efana ne-blackjack, i-roulette, i-baccarat, nezihloko ze-poker, ngeke udumazeke ngalokho abanakho esigabeni semidlalo yetafula kule khasino. Kunezihloko ezicishe zibe yishumi nambili ezihlukile, zonke ziyimidlalo yamakhadi / yetafula emihle enezithombe ezibukeka zizinhle kanye nokudlaleka okungcono kakhulu kwegeyimu.
Ngenqwaba yemidlalo ye-poker yevidiyo kanye nemidlalo ekhethekile, i-This Is Vegas nayo iqukethe okuningi komgembuli onelukuluku. Uma ufuna isipiliyoni se-poker yakudala emishinini, dlala imidlalo efana ne-Joker Poker, i-Jacks or Better, kanye ne-Double Joker. Imidlalo ekhethekile ifaka i-bingo, i-keno, nezihloko ezimnandi ze-arcade ezinjenge-Tiki Treasure, i-Gunslinger Gold, kanye ne-Penguin Payday.
Ingabe i-This Is Vegas Casino Iyatholakala Yini Kuselula?
Yebo, ungadlala ngo-100% le khasino kanye nemidlalo kuselula yakho, uma nje ifeza le mibandela elandelayo:
Iyi-smartphone enesiphequluli sesimanje esifana ne-Chrome noma i-Safari
Kune-inthanethi esebenzayo ngaso sonke isikhathi (4g/WiFi ukuthola isipiliyoni esingcono kakhulu)
Iselula ibukezwa njalo ukuphepha (zokuphepha nokuqina ku-inthanethi)
Ungasebenzisa omabili amadivayisi e-iPhones nawe-Android ukudlala imidlalo ye-This Is Vegas casino. Asikho isidingo sokuthenga amaselula abizayo. Imidlalo ilula ngokwanele ukuthi isebenze kumafoni angabizi kusuka ku-Moto, i-Samsung ne-Huawei.
Ngingayidawuniloda Yini i-This Is Vegas Casino Kuselula Yami?
Ikhasino ayidingi ukuthi udawunilode i-app. Kulezi zinsuku, amakhasino e-inthanethi anamuhla awasebenzisi ama-app – esikhundleni salokho ungavula imidlalo ngqo kusiphequluli sakho. Ngena ngemvume usebenzisa i-akhawunti yakho nephasiwedi – ungasebenzisa i-akhawunti efanayo kumaselula amaningi nama-PC. khumbula nje ukugcina imininingwane ye-akhawunti iyimfihlo!
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-This Is Vegas Casino
Wire Transfer Yebo Kuze kube izinsuku ezingu-7
Visa Yebo Kuze kube izinsuku ezingu-7
Bitcoin Yebo Izinsuku 1-3
Skrill Yebo Izinsuku 1-3
Neteller Yebo Izinsuku 1-3
Ngiyikhipha Kanjani Imali ku-This Is Vegas Casino?
Ukuze ukhiphe imali ekhasino ye-inthanethi, kumele wenze isicelo sokukhipa esigabeni sikaKheshiya / Sokubhenka sekhasino. Ungathatha izinyathelo ezilandelayo:
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho yasekhasino
Hlola ibhalansi ye-akhawunti ukubona ukuthi unayo yini imali ongayikhipha
Hlola isimo sebhonasi yakho ukuqinisekisa ukuthi awekho amabhonasi asebenzayo
Hlola izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali zebhonasi ukuqinisekisa ukuthi ugcwalise yonke imibandela
Yenza kuphela isicelo sokukhipha imali ngemuva kwalezi zinyathelo ezimbili ezingenhla, ngaphandle kwalokho, ikhasino ingavimbela imivuzo yakho!
Yiya ekhasini likakheshiya, khetha ukukhipha imali, faka inani olifunayo, bese ukhetha indlela yokukhokhwa
Khumbula ukuthi ikhasino ingakucela amakhophi kamazisi wakho nemininingwane yasebhange. Lokhu kuyingxenye yemithethonqubo Yazi Amakhasimende Akho (Know Your Customer) – wonke amakhasino asemthethweni kumele ahlole abadlali. Uma uhluleka ukulandela imithethonqubo, ikhasino ingavimba ukukhipha imali kwakho.
Izindlela Ezivunyelwe Zokudiphozitha Imali e-This Is Vegas Casino
Imininingwane Evamile Usizo Lwamakhasimende
Umphathi ngu: SSC Entertainment NV, Curacao Umphathi ngu: SSC Entertainment NV, Curacao I-imeyili: [email protected]
Ilayisense ngayase: Curacao Ingxoxo Ebukhoma: Yebo
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhsayithi: Chofoza lapha ukuvakashela isayithi
Ingabe i-This Is Vegas Ikhohlisa Abantu (Scam)?
I-This Is Vegas Casino iyikhasino ye-inthanethi enelayisense ephelele. Uma ukhathazekile ngokuphepha nokuthembeka kwale webhusayithi, khululeka – isemthethweni ngo-100%. Inelayisense yokugembula yase-Curacao futhi iqhutshwa yibhizinisi elaziwayo elinamakhasino e-inthanethi amaningi.
Lelo phuzu lokugcina libalulekile kukhasino entsha sha efana ne-This Is Vegas. Kuthatha isikhathi ukuthi ikhasino ye-inthanethi izakhele udumo kubo bonke abadlali. Kepha ngoba le khasino entsha sha ivela ku-opharetha osenebhizinisi cishe iminyaka engu-20, asikho isidingo sokuthi ukhathazeke kakhulu.
Abadlali abavela emazweni amaningi bavinjelwe ukuvula i-akhawunti kule khasino, kepha iNingizimu Afrika ayikho ohlwini lwezindawo ezivinjelwe. Zonke izakhamuzi zaseNingizimu Afrika kanye nabahlali bakhululekile ukuvula i-akhawunti yomdlali futhi baqale ukugembula ngemali yangempela kule khasino.
Umkhawulo kuphela uhlobene nobudala – le yikhasino egcina umthetho eyamukela kuphela abadlali abaneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala. Iphinde ibe nenqubomgomo eningi yokuvikela amaklayenti abo ezingozini zokugembula okuyinkinga.
Kodwa into esemqoka efakazela ngaphandle kokungabaza ukuthi i-This Is Vegas igxile kakhulu embonini yaseNingizimu Afrika yile – 100% ukwamukela amadiphozithi ngamaRandi kanye nokukhipha imali ngawo. Awekho maningi amakhasino e-inthanethi aphesheya amukela izinkokhelo ngemali yaseNingizimu Afrika. Ngokujabulisayo, i-This is Vegas yehlukile mayelana lokho.
Okuvelele e-This Is Vegas Casino:
Ibhonasi yediphozithi engekho enhle kakhulu nephakheji yokukwamukela
Iyamukela i-Bitcoin futhi kunebhonasi yokukwamukela ekhethekile ye-bitcoin
Ukubuyisela ukheshi nsuku zonke okutholakala kubo bonke abadlali
Amaphromoshini ama-VIP akhethekile nemihlomulo
Iqoqo elikhulu lemidlalo yetafula nama-slots
Isoftware ethembekile evela ku-Rival Gaming
Inekhasino ye-inthanethi evula ngokuhesha (instant online), yeselula, kanye nekhasino edawunilodiwayo
Inezidingo zokubheja eziphansi kumabhonasi
Ubuhle Nobubi be-This Is Vegas Casino
Yini Eyenza Ukuthi i-‘this Is Vegas’ Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
I-This Is Vegas iyikhasino enhle kakhulu emhlabeni jikelele enezinzuzo eziningi ezihlukile zabadlali abavela emhlabeni wonke. Kepha ikhethekile kakhulu kubadlali baseNingizimu Afrika ngenxa yalezi zizathu ezilandelayo –
Ayikho imikhawulo kubadlali baseNingizimu Afrika ekubhaliseni
Wonke amabhonasi ayatholakala kubantu baseNingizimu Afrika, ngokungafani namanye amazwe
Ukwamukela izinkokhelo ngeRandi kanye nokukhipha imali
Amabhonasi nawo angeRandi, kanye nezinye izimali zomhlaba wonke
Iqoqo elihle lemidlalo elinama-jackpots akhula njalo (progressive jackpots)
Izikhalo nge-Vegas Casino South Africa Complaints
Njengoba iyikhasino entsha sha esungulwe ngo-2020, sisazobona noma yiziphi izikhalazo ezivela nomaphi maqondana nale khasino. Lokhu kungashintsha ngokuhamba kwesikhathi, futhi nakanjani sizobukeza okufanayo lapha. Kepha ngokubheka amanye amakhasino e-inthanethi aphethwe ngu-opharetha ofanayo, siyaqiniseka ukuthi inani lezikhalo lizobe lincane kakhulu.
Yini i-This Is Vegas Casino?
I-This Is Vegas yikhasino ye-inthanethi entsha sha esungulwe ngo-2021. Iyatholakala kubadlali abavela emazweni amaningi emhlabeni jikelele, kufaka iNingizimu Afrika. Ikhasino ngeyase-Curacao e-Caribbean futhi inelayisense ekhishwa yi-Gambling Authority yalapho.
Ungadlala amakhulukhulu ama-slots e-inthanethi, imidlalo yamakhadi, imidlalo yetafula, neminye imidlalo yokugembula ye-arcade kule khasino. Iyamukela ukugembula ngemali yangempela futhi iyamukela izinkokhelo ngamaDola, ama-Euro, amaPhawundi, ama-Bitcoins, namaRandi aseNingizimu Afrika. Ungasebenzisa i-PC noma idivayisi yeselula ukudlala kule khasino ye-inthanethi.
Ngubani umnikazi we-This Is Vegas Casino?
Ikhasino iphethwe futhi iqhutshwa yinkampane ebizwa nge-SSC Entertainment NV. Ingumhlinzeki wekhasino ye-inthanethi onolwazi oseneminyaka engaphezu kweyishumi ekhona. Iphethe amanye amakhasino e-inthanethi adumile. Inkampani itholakala e-Heelsumstraat Curacao, indawo eyayiyikoloni lase-Dutch e-Caribbean. Amakhasino ayo asebenza ngaphansi kwelayisense esemthethweni ngo-100% ye-Curacao Gambling Authority.
Ingabe i-This is Vegas Casino Isemthethweni eNingizimu Afrika?
Imithetho yamanje eNingizimu Afrika ayiwavumeli amakhasino e-inthanethi akuleli ukuthi asebenze emakethe. Kodwa i-This Is Vegas iyikhasino ye-inthanethi yaphesheya e-Curacao futhi ayiphansi kwemithetho yaseNingizimu Afrika. Futhi uhulumeni usazothatha noma yiziphi izinyathelo ngamakhasino aphesheya kwezilwandle njengoba kuyinqubo enzima kakhulu. Futhi akahlaseli abadlali abadlala kulawa makhasino. Ngakho-ke kuphephe ngo-100% ukuthi abantu baseNingizimu Afrika badlale e-This Is Vegas ngo-2021.
Ingabe i-'This is Vegas' Casino iphephile?
Le khasino iphephe kakhulu kubadlali ngenxa yalezi zizathu: –
Inelayisense yokugembula esemthethweni evela enhlanganweni esemthethweni – The Curacao Gambling Authority
U-Opharetha akamusha noma uyaziwa – Uneminyaka eminingi embonini
Ikhasino inikela kuphela ngemidlalo ethembekile evela kubadayisi abanjenge-Betsoft kanye ne-Rival Gaming
Ikhasino inezinqubomgomo eziqinile zokuvikela abadlali nokuvikela ukugembula kwabancane
Banikela ngezindlela zokukhokha eziphephilekuphela
Njoba ukubona, kunezizathu eziningi zokucabanga i-This Is Vegas injengekhasino ye-inthanethi ephephe ngo-100%.
Ingabe i-This Is Vegas Casino Inezici Zokubhejela Ezemidlalo?
Cha, i-This Is Vegas Casino ayinazo izici zokubhejela ezemidlalo. Le akuyona i-sportsbook yekhasino ye-inthanethi. Ungadlala imidlalo yasekhasino lapha kuphela. Eminye imidlalo ye-arcade nama-slots inengqikithi yezemidlalo.